‘भर्सटायल गायिका’ पुजासँग अन्तररंग |भन्छिन्, ‘म सुगम गायिका’ | Screennepal
२०७६, २५ बैशाख बुधबार ०८:०३screennepalfeature, Music0
गायिका पुजा सुनुवार सानैदेखि गाउँथिइन् । औपचारिक रुपमा गायन अँगालेकै डेढ दशक हुन लाग्यो । यहाँसम्म आइपुग्दा पुजा ‘भर्सटायल’सँगै मात्र होइन, ‘बहुभाषिक गायिका’का रुपमा समेत चिनिएकी छन् । नेपालमा बोलिने अधिकांश भाषामा गाउन रुचाउँने पुजाले नेपालीका अलावा सुनुवार, राई, थारु, नेवार, तामाङलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी भाषाका गाइसकेकी छन् । तर, उनी आफूलाई भने ‘बुहभाषिक’भन्दा पनि एक कुसल सुगम गायिका भन्न रुचाउँछिन् । ‘बहुभाषिक गायिका त मिडियाले दिने उपमा हो’ पुजाले भनिन्, ‘म सुगम गायिका हुँ, तैपनि नेपाल बहुभाषिक र सांस्कृतिक भएको देश भएकाले सबै भाषा र किमिमका गीत गाउने मेरो रुचि हो ।’ ०७३ मा ‘नजर’ नामक सोलो एल्बम ल्याएपछि दर्शक तथा श्रोताको नजरमा परेकी सयौँ गीतका गायिका पुजासँग कुराकानी ।
– गीतसंगीतमै व्यस्त छु । कार्यक्रम, रेकर्डिङलगायत आफ्नो नयाँ एल्बमको पनि तयारी गर्दैछु ।
गाउन थाल्नुभएको कति भयो ?
– सानैदेखि गाउँथे । तर, औपचारिक रुपमा गाउन सुरु गरेको चाहिँ १२÷१३ वर्ष भयो ।
यतिका वर्षमा कति गीत गाउनुभयो नि ?
– ढेड सयभन्दा बढी गाएँ होला । म नेपाली मात्र गाउँदिनँ, राई, सुनुवार, थारु, नेवारलगायतका भाषाभाषिका गीत पनि गाउँदै आएकी छु । मलाई नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाका गीत गाउने सोच छ ।
खाशमा तपाइँ कुन ‘क्याटगोरी’को गायिका हो ?
– म सुगम गायिका हुँ । मेरो गायनको धार सुगम हो । तर, गाउनचाहिँ पुर्वेली लोकगीतदेखि लिएर विभिन्न भाषाका गीत पनि गाउँछु ।
तपाइँलाई ‘बहुभाषिक गायिका’ पनि भन्दारहेछन् नि ?
– खै, त्यो त मिडियाले भन्ने कुरा हो । तर, म आफूचाहिँ सुगम गायिका नै हुँ ।
तपाइँले गायन नै किन रोज्नुभयो ?
– म पुर्वमा (उदयपुर) जन्मिएकी मान्छे । सानैदेखि गाउन भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । मेरो गायनको सुरुवात पनि पुर्वेली लोकगीतबाटै भएको हो । आफै पुर्वेली भएकाले अहिले पनि गाउँछु ।
आफ्नो सांगीतिक करिअरको सुरुवाती दिन सम्झिँदा कस्तो लाग्छ ?
– अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ । जुन समयमा मैले गायन अँगाले, त्यो समयमा एल्बम बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले क्यासेट, एल्बम बिक्री गर्ने पसलको मुखसमेत हेर्न पाइँदैन । १०÷१२ वर्षअघिसम्म एल्बम बिक्रीको पैसाले कलाकारलाई धान्थ्यो । र, त्योबेला एल्बम निकाल्न पनि गाह्रो थियो । तर, समयले हामीलाई डिजिटल प्रविधिमा पु¥याएको छ । र, स्वीकार्नू पनि परेको छ ।
डिजिटल प्रविधिसँगै ‘भाइरल’ प्रवृति पनि आएको छ नि । कस्तो लाग्छ ?
– यो समयको माग हो । तर, हामीजस्ता सुगम गीतसंगीतका कलाकारलाई ‘भाइरल’ बन्नु छैन । ‘भाइरल’ भनेको आज आउँछ । भोली हराउँछ । तर, सुगमसंगीत कालजयी बन्छ ।
यु–ट्युबको ‘भाइरल’ हुने प्रवृतिले सुगमसंगीतका कलाकारलाई असर परेको छ नि होइन र ?
– एकदमै असर परेको छ । तर, के गर्नु जमाना नै यस्तै छ । जमानाअनुसार चर्चाका लागि मात्र आउने कलाकारले स्थापित सुगम कलाकारहरु ओझेल परेका छन् । तैपनि गुनासो छैन । गीतसंगीत क्षेत्र भनेको एउटा स्टेज हो, जहाँ आउने–जाने गर्छ र हुनु पनि पर्छ ।
श्रोताले रुचाएका आफ्ना गीतहरु भन्नुपर्दा ?
– थुपै्र छन् । तैपनि भन्नुपर्दा पछिल्लो समय गाएको ‘शेल्फी–२’को ‘ट्युशन पढाउँछु’, ‘नसम्झि बसाँै कसरी’, ‘एकोहोरो माया’ र ‘काठमाडौं सहर’ बोलका मेरो गीतहरुलाई श्रोता तथा दर्शकले रुचाएका छन् ।
तपाइँ गीतसंगीतको ‘फूलटाइमर’ हो ?
– हो, जबदेखि गायन अँगाले, तबदेखि म गीतसंगीतमै छु । अरु केही काम गरेकी छैन ।
एल्बम बिक्री शून्य छ । गीत गाएरै धान्नेचाहिँ कसरी ?
– मेला, उत्सव र देश–विदेशको कार्यक्रमले कलाकारलाई धानेको छ । एउटा मात्र गीत चल्यो भने विभिन्न स्थानमा हुने महोत्सव र मेलामा गाउन पुगेको हुन्छ । पछिल्लो समय कलाकारको आम्दानी भनेकै स्टेज कार्यक्रम हो । मेरो त्यही हो । गायनबाटै म कुवेत, कतार, दुवई, सिंगापुर, थाइल्याण्डलगायतका देशमा पुगेकी छु ।
अब नयाँ सोच के छ ?
– सोलो एल्बमको तयारी गर्दैछु । तर, त्योभन्दा अगाडि एउटा सिंगल ट्रयाकको भिडियो रिलिज गर्दैछु । दृष्टिबाट
Previous Postअनुष्का भइन् २५औँ ‘मिस नेपाल’ Next Postपत्रकार डिबी खड्काको अर्को डेउडा (भिडियो)